NKPUGHE 1 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (NKP 1)
Ihe dị nꞌakwụkwọ a bụ mkpughe banyere ihe na-aga ime nꞌoge dị nꞌihu na ndụ Jisọs Kraịst. Ọ bụ Chineke nyere ya ike ka o site nꞌọhụ kpughee ya nye Jọn ohu ya. E sitere nꞌeluigwe zite mmụọ ozi bịara kọwaara Jọn ihe ọhụ ndị a ọ hụrụ pụtara.
Jọn nꞌonwe ya dere ihe nile ọ hụrụ na ihe nile ọ nụrụ nꞌakwụkwọ, bụ okwu ahụ nile Chineke na Jisọs Kraịst kwuru.
Ngọzi na-adịrị onye ọ bụla ga-agụpụta ihe e dere nꞌakwụkwọ amụma a nꞌụlọ nzukọ. Ọ ga-anata ngọzi pụrụ iche site nꞌaka Onyenwe anyị. Ndị nile ga-egekwa ntị mgbe a ga-agụpụta ha, ma meekwa ihe e kwuru, ga-enwetakwa ngọzi. Nꞌihi na oge a ga-emezu ihe ndị a dị oke nso.
Mgbe o chịkọtasịrị anyị kpọbata anyị nꞌalaeze ya, o mere ka anyị bụrụ ndị nchụaja Nna ya bụ Chineke. Nꞌihi na ọ na-achị ruo mgbe nile ebighị ebi. Ka anyị nye ya otuto ruo mgbe nile ebighị ebi. Amin.
Lezie anya! Ọ na-abịa ọsịịsọ site nꞌigwe ojii. Anya nile ga-ahụkwa ya nꞌezie. Ee, ma ndị ahụ nile kpọrọ ya ntu, ha ga-ahụ ya. Mba nile dị nꞌụwa ga-eru uju kwaa akwa, maakwa jijiji nꞌụbọchị ahụ ọ ga-abịa. Ka ọ dịrịkwa otu a.
Abụ m Alfa na Omega, Mmalite na Ọgwụgwụ ihe nile. Ihe ndị a ka Chineke kwuru, onye bụ Onyenwe anyị, na onye nwezuru ike nile. Onye dị ugbu a, na onye dịrị site na mmalite, na onye gaje ịbịa ọzọ.
Nꞌụbọchị Onyenwe anyị, nke bụ ụbọchị Sọnde, mgbe m nọ na-ekpe ekpere, na mberede, anụrụ m oke olu tiri mkpu nꞌakụkụ m. Olu a dara ụda dị ka opi ike.
Olu ahụ tiri mkpu gwa m okwu sị, “Mụ onwe m bụ Mmalite na Ọgwụgwụ ihe nile.” Mgbe ahụ olu ahụ gwakwara m okwu sị, “Detuo ihe nile ị hụrụ nꞌakwụkwọ. I dechaa ya, ziga ha nye nzukọ Kraịst asaa ahụ dị nꞌala Tọkị. Ya bụ, nzụkọ dị nꞌEfesọs, na Smarna, na Pegamọs, na Tiatira, na Sadis, na Filadelfia, na Laodesia.”
Mgbe m chigharịrị lee anya ịhụ onye na-agwa m okwu, ahụrụ m oriọna asaa e tinyere nꞌihe na-ejide oriọna e ji ọlaedo kpụọ.
Agịrị isi ya na-acha vaa dị ka ogho. Anya ya abụọ na-enwụkwa dị ka ire ọkụ.
Ụkwụ ya abụọ na-enwụ enwụ dị akpụkpọ ụkwụ e hichapụrụ nke ọma. Okwu si ya nꞌọnụ na-ada wụaa wụaa dị ka ụda nnugharị ebili mmiri.
O jidere kpakpando asaa nꞌaka nri ya, mma agha dị nkọ nwere ihu abụọ sikwa nꞌọnụ ya na-apụta. Ihu ya na-egbu maramara dị ka anyanwụ wapụtara nꞌike ya dum.
Mgbe m hụrụ ya, adara m nꞌala nꞌụkwụ ya dị ka onye nwụrụ anwụ. Ma o weere aka nri ya metụ m nꞌahụ gwa m okwu sị, “Atụla egwu. Abụ m Mmalite na Ọgwụgwụ ihe nile.
Abụ m onye ahụ nwụrụ anwụ, ma na-adị ndụ. Ugbu a ana m adị ndụ ruo mgbe nile ebighị ebi. Ọ bụ m ji igodo ọkụ ala mmụọ na ọnwụ. Atụla egwu!
Detuo ihe nile ị hụrụ na nke a ga-ekpughere gị malite ugbu a.
Nke a bụ ihe kpakpando asaa ahụ ị hụrụ nꞌaka nri m, na oriọna asaa ndị ahụ pụtara. Kpakpando asaa ahụ bụ ndị mmụọ ozi ụlọ nzukọ asaa ahụ ị na-edegara akwụkwọ a. Osisi oriọna asaa ahụ bụ ụlọ nzukọ ndị ahụ nꞌonwe ha.